कास्की २ को उपनिर्वाचनमा रविन्द्र पत्नी विद्या भट्टराई उठ्ने ! - Gandak News
कास्की २ को उपनिर्वाचनमा रविन्द्र पत्नी विद्या भट्टराई उठ्ने !
गण्डकन्यूज द्वारा ३० भाद्र २०७६, सोमबार १६:३७ मा प्रकाशित
पोखरा ।लामो समय चर्चा/परिचर्चापछि अन्ततः स्वर्गीय रबिन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराई नै कास्की २ को उपनिर्वाचनमा नेकपाको उम्मेदवार हुने लगभग निश्चित भएको छ । आगामी मंसिर १४ गते कास्कीको क्षेत्र नं. २ मा हुने देशकै एकमात्र प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाबाट रविन्द्रपत्नी विद्या नै उम्मेदवार हुने टुंगो लागेको नेकपा श्रोतले जनाएको छ ।
श्रोतका अनुसार नेकपाको बैठकमा सोमबार अधिकांश नेताहरुले विद्यालाई नै उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने धारणा राखे । विद्यार्थी राजनीतिमा लामो समय होमिएकी विद्या प्राध्यापन सेवातिर लागेपछि राजनीतिबाट टाढा भई श्रीमान् रविन्द्रलाई सघाएकी थिईन् । उनी सक्षम भएकाले पनि राजनीतिमा फर्कन शुभचिन्तकको अपेक्षा रहेको थियो । रविन्द्रको अन्तिम संस्कारताका पोखरा आउँदा बामदेव गौतमको चर्चा चल्यो, तर त्यसबेलै बामदेवले पनि विद्यालाई नै अगाडि सारे राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । पछिल्लो समय फेरि बामदेवको उच्च सम्भावना रहेको, अध्यक्षहरुले समेत बामदेवलाई अफर गरेकोमा जनस्तरमा धेरै विमति आए । अब नेताहरुले नै बैठकमा विद्यालाई उठाउनुपर्ने माग गरेपछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई थप दबाब परेको हो ।
अहिले नेकपा कास्कीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विद्या भट्टराईलाई बधाईका साथ चुनावमा जित्न शुभकामना समेत दिन सुरु गरिसकेका छन् । तर, पार्टी भने केही बोलेको छैन । गत १५ फागुनमा ताप्लेजुङमा भएको हेलीकोप्टर दुर्घटनामा पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की २ रिक्त रहेको छ । कास्की २ मा तुलबहादुर गुरुङ र सोमनाथ प्यासीको चर्चा पनि चलेको थियो ।